Mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ Metal Precision, Mpepe ịdọ aka na ụkwụ dị larịị, igwe mpempe akwụkwọ nke si na China onye na-emepụta ihe.
Nkọwa:Ndọ mpempe akwụkwọ nke Ndọ,Nhazi Nhazi,Ngwaọrụ mpempe akwụkwọ ọla eji eme ihe,Sheet Metal Leveler,Ngwakọta mpempe akwụkwọ Metal Leveler,Ndọgbu Ngha
Home > Ngwaahịa > Mpempe akwụkwọ Metal Metal Straightener > Ndọ mpempe akwụkwọ nke Ndọ
Ngwaahịa nke Ndọ mpempe akwụkwọ nke Ndọ , anyị bụ ndị na-emepụta ọkachamara si China, Ndọ mpempe akwụkwọ nke Ndọ , Nhazi Nhazi suppliers / factory, wholesale high-quality products of Ngwaọrụ mpempe akwụkwọ ọla eji eme ihe R & D and manufacturing, anyị nwere ọrụ zuru ezu mgbe-ahịa na nkwado teknụzụ. Le anya n'ihu na nkwado gị!
Igwe eji akpụ ọkwa dị elu  Kpọtụrụ ugbu a
Elu igwe dị na mbụ na - adịkarị elu  Kpọtụrụ ugbu a
Igwe eji akpụ ọkwa dị elu
Igwe eji akpụ ọkwa dị elu bụ otu ụdị mpempe akwụkwọ metal ozugbo na ahịa dị ka ọkwa nke metal mpempe akwụkwọ. Elu igwe dị elu maka ihe nrịgo a dị mkpa maka ihe ndị mepere emepe nke igwe, ihe ekwentị, yana ọtụtụ akụkụ dijitalụ ndị ọzọ. . Njirimara na...
Elu igwe dị na mbụ na - adịkarị elu
Elu igwe kwụ otu ebe na otu ụdị mpempe akwụkwọ metal ozugbo na ahịa dị ka ọkwa nke mpempe akwụkwọ. Njirimara na uru nke Igwe Ndozi Nweta Ọdịdị Dị elu Kwesịrị ekwesị maka ọkpụrụkpụ ihe: 0.1-0.6mm. Kwesịrị ekwesị maka ụdị akwa igwe anaghị arụ ọrụ ngwa...
China Ndọ mpempe akwụkwọ nke Ndọ Ngwa
A na-eji igwe eji eme ihe mpempe akwụkwọ iji mezie mpempe akwụkwọ na-enweghị atụ, a na-enwetakwa nsonaazụ nke ọkpụrụkpụ mpempe ma ọ bụ efere site na elu na ala ala, iji nweta nsonaazụ dị mma. A na-akpọkwa ya onye leveler. Onye na-ahụ maka izugbe bụ ihe kachasị 9 na ala 10 iberibe. Ma tupu ma mgbe ngagharị mbufe. Akụkụ nke elu nwere aka maka ndozi dị mma nke ogo dị larịị.
Ndọ mpempe akwụkwọ nke Ndọ Nhazi Nhazi Ngwaọrụ mpempe akwụkwọ ọla eji eme ihe Sheet Metal Leveler Ngwakọta mpempe akwụkwọ Metal Leveler Ndọgbu Ngha Mpempe akwụkwọ Ngwaọrụ Pịa eriri mpempe akwụkwọ nri